कोरोना संक्रमणपछि २८ दिनसम्म अचेत बनेकी नर्सलाई डाक्टरले भिएग्रा खुवाएर बचायो – Patrika Nepal
कोरोना संक्रमणपछि २८ दिनसम्म अचेत बनेकी नर्सलाई डाक्टरले भिएग्रा खुवाएर बचायो
पुष २०, २०७८ मंगलबार 38
काठमाडौं । बेलायतमा कोभिड-१९ को संक्रमणपछि मृ’त्युको मुखमा पुगेकी एक नर्सले पुनर्जीवन पाएकी छन् । कोभिड-१९ को संक्रमणपछि २८ दिनसम्म अचेत अवस्था (कोमा) मा पुगेकी बेलायतकी ३७ वर्षीया नर्स मोनिका अलमेइडाले पुनर्जीवन पाएकी हुन् ।
सबै उपाय असफल भएपछि सहकर्मी डाक्टरले भिएग्रा दिएर उपचार गरेपछि आफ्नो जीवन बँचेको मोनिकाले द सन पत्रिकालाई बताइन् । ‘मेरो होस खुलेपछि कन्सल्टेन्टसँग हल्का मजाक भएको थियो किनभने उहाँलाई मैले चिनेकी थिएँ’, मोनिकाले भनिन्, ‘उहाँले भिएग्रालाई औषधिको रुपमा प्रयोग गरेको बताएपछि म हाँसे र मजाक गरेको ठानेकी थिए तर उहाँले साँच्चै नै भिएग्राको धेरै डोज दिएको बताउनु भयो ।’
मोनिकाको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा सामान्य तहमा पुर्‍याउन स्वास्थ्यकर्मीले निकै कसरत गरेका थिए । तर उनको अवस्था बिग्रँदै गएपछि उनलाई आईसीयूमा राखिएको थियो । उनी अवस्था निकै गम्भीर बन्दै गएपछि नोभेम्बर १६ गते अचेत हुन पुगेकी थिइन् ।
स्मरणीय छ- भिएग्रा प्रयोग गरेपछि शरीरका रक्तनली सफा हुने र श्वासप्रश्वास नली खुल्ने भएकाले यसलाई कोभिड संक्रमितको सम्भावित उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने नाइट्रिक अक्साइड झैं भिएग्रालाई प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने भनेर हाल अनुसन्धान भइरहेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
Prevछोरा र श्रीमान ह’राए पछि खोज्दै आएका आमा र श्रीमतीको अनुहार मा खुशी !
Nextसं’म्ब’न्ध वि’च्छे’द ग’रिसकेका पूर्व पतिसंग फेरी माया बस्यो,अब म के गरौं?
आमिर खानले तेस्रो विवाह गरेको तस्वीर भाइरल !
भक्तपुरमा के हुन् थाल्यो यस्तो ? यस्ता ड’रलाग्दा घटना बाहिरिन थाले !